HORDHAC: Wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka adag kooxaha Man United vs Chelsea ee horyaalka Premier League – Gool FM
HORDHAC: Wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka adag kooxaha Man United vs Chelsea ee horyaalka Premier League
(England) 11 Agoosto 2019. Garoonka Old Trafford ayaa martigelin doona kulanka xiisaha badan horyaalka Premier League ee la wada sugayo maanta oo Axada, kaasoo ay indhaha ku hayaan jamaahiirta kubadda cagta ee caalamka oo dhan.
Kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa maqribka marti ugu noqon doonto Manchester United garoonka Old Trafford, waxayna labada kooxood kulankan kaga daah furan doonaan horyaalka Premier League xili ciyaareedka cusub ee 2019/20.
Kulanka: Manchester United Vs Chelsea
Taariikhda: Axad, 11 Agoosto 2019
Saacadda: 6:30 maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Garsoorka: Anthony Taylor.
Dhamaan seddexda saxiix cusub ee kooxda Manchester United ayaa diyaar u ah kulankan, xili Harry Maguire iyo Aaron Wan-Bissaka ay u badan tahay inay saftaan kulankoodii ugu horeeyay horyaalka Premier League ee kooxda Red Devils.
Xiddigaha Eric Bailly iyo Tim Fosu-Mensah ayaa kulankan dhaawac ku seegaya, xili Alexis Sanchez ay u badan tahay inuusan ciyaari doonin kulankan, maadaama uu dhawaan dhaawac ka soo kabtay.
Tababare Frank Lampard ayaa go’aan ka gaari doona xiliyada soo aadan hadii uu N’Golo Kanté diyaar u yahay kulanka Manchester United.
Wali waxay su’aal ka taagan tahay xiddigaha Willian iyo Antonio Rudiger iyo haddii ay diyaar u noqon doonaan kulanka ka dhici doona garoonka Old Trafford.
Christian Pulisic ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo kulankiisii ​​ugu horreeyay horyaalka Premier League ee kooxda Chelsea halka Mason Mount uu ciyaari doono kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Blues haddii loo xusho.
* Wuxuu kulankan noqon doonaa kii ugu horeeyay ee rasmi ah oo ay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ku kulmaan kulankooda daah furka ee taariikhda horyaalka Premier League, iyadoo ay hogaaminayaan laba tababare oo horey ugu soo ciyaaray labada kooxood.
* Waa markii ugu horeysay ay ku kulmaan kooxaha Manchester United iyo Chelsea kulankooda daah furka ee horyaalka Premier League, tan iyo xilli ciyaareedkii 2004-2005, xiligaas oo ay Blues guul ku gaartay 1-0, waxaana hogaaminayay tababare Jose Mourinho.
* Manchester United ayaa badisay kaliya 2 ka mid ah 13-kii kulan ee ugu danbeysay ay kaga horyimaadeen Chelsea horyaalka Premier League, laakiin wax guuldaro kama aysan soo gaarin 6-dii kulan ee ugu danbeysay ay ku martigalisay garoonka Old Trafford, 4 barbaro ah, xili sidoo kale 2 kulan ay guul gaareen.
* Chelsea (17 jeer) iyo Manchester United (18 jeer) waa kooxaha ugu guulaha badan kulamada daah furka ee horyaalka Premier League, waana in ka badan kooxaha kale taariikhda Premier League inta lagu gudi jiro kulamada daah furka.
* Chelsea wali guuldarro kama aysan soo gaarin marka ay ciyaareyso kulamadeeda koowaad ee horyaalka Premier League ah maalinta Axada, waxayna kooxda Blues guul gaartay 8 kulan, halka 3 kulana ay barbaro galeen, 11 kulan oo ay ciyaareen.
* Manchester United ayaa la kulantay guuldarooyinkii ugu badanaa ee horyaalka Premier League kulamada ay la ciyaartay Chelsea, waxaana laga badiyay 18 jeer, waxaana ay sidoo kale kala kulantay Blues goolasha ugu badan, waxaana laga dhaliya 71 gool, waana in ka badan kooxaha kale.
* Manchester United ayaa kulankii ugu dambeysay ay kooxda Chelsea kula ciyaartay Old Trafford ciyaarta daah furka ee horyaalka Premier League wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii 1958-1959, iyadoo ay Red Devils guul ku gaartay 5-2, waxaana kulankan seddexleey ka dhaliyay Bobby Charlton.